Ọsọ nke ụda: àgwà, mgbasa na ebili mmiri | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 21/10/2021 10:00 | Ciencia
N'ezie ọtụtụ oge ị hụla na mgbe oke mmiri na -efe, ihe mbụ na -enwu bụ ọkụ, mgbe ahụ ụda na -abịa. Nke a bụ n'ihi na Ọdịda ụda. Ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtala ihe bụ oke oke ụda nwere ike ịgbasa na ikuku. Na physics nke a dị ezigbo mkpa.
Yabụ, anyị ga -arara akụkọ a ka ọ gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ọsọ ụda na ka o si agbasa.
1 Ọsọ nke ụda
2 Gịnị bụ ụda
2.1 Ụda dị na ọkà okwu
3 Ọdịda ụda na mgbasa ozi dị iche iche
4 Ụdị ebili mmiri na -agbasa
Ọsọ mgbasa nke ebili mmiri na -adabere na njirimara nke ọkara ebe ọ na -agbasa, ọ bụghị na njirimara ebili mmiri ma ọ bụ ike na -emepụta ya. A na -akpọkwa ọsọ mgbasa nke ebili mmiri ụda ọsọ ọsọ nke ụda. Ọnọdụ okpomọkụ bụ 20ºC, nke bụ mita 343 kwa sekọnd.
Ọdịdị ụda na -adịgasị iche na mgbasa mgbasa yana ụzọ o si agbasa na igwe na -enyere aka ịghọta nke ọma njirimara ụfọdụ nke mgbasa ozi. Mgbe ọnọdụ okpomọkụ nke mgbasa mgbasa na -agbanwe, ọsọ ụda ga -agbanwekwa. Nke a bụ n'ihi na mmụba nke okpomoku na -eduga n'ịbawanye ugboro ugboro nke mmekọrịta n'etiti irighiri ihe na -ebu mkpọtụ, nke na-asụgharị n'ime mmụba nke ọsọ nke ebili mmiri.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ọsọ ụda n'ime ihe siri ike dị elu karịa mmiri mmiri yana ọsọ ụda n'ime mmiri dị elu karịa gas. Nke a bụ n'ihi na ihe siri ike karị, ka ogo nke ijikọ njikọ atọm na -adị ukwuu, nke na -amasị mgbasa nke ebili mmiri ụda.
Ọsọ nke ịgbasa ụda dabere tumadi na elasticity nke onye mgbasa ozi na -agbasa ya. Mgbatị na -ezo aka n'ikike iweghachi ọdịdị mbụ ya.
Gịnị bụ ụda
Ụda bụ ebili mmiri nke nwere ike ịgbasa site na ikuku site na mkpakọ na ịda mbà n'obi. Ụda anyị na -ahụ gburugburu anyị abụghị naanị ike sitere na mkpọtụ nke na -agbasa site na ikuku ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ, nke enwere ike ịnata ma nụ mgbe ọ ruru na ntị mmadụ. Anyị maara na ụda na -aga n'ụdị ebili mmiri.
Ebili mmiri bụ ọgba aghara na -eme mkpọtụ n'etiti, nke na -ebugharị ike site n'otu isi gaa na nke ọzọ na -enweghị kọntaktị kpọmkwem n'etiti isi ihe abụọ a. Anyị nwere ike ịsị na ebili mmiri na -emepụta site na ịma jijiji nke irighiri ihe ndị na -eme ka ọ na -agafe, ya bụ, usoro mgbasa nke kwekọrọ na mwepụ ogologo (na ntụpọ) nke mkpụrụ ndụ ikuku. Mpaghara nwere nnukwu mwepụ na -egosi na mpaghara njupụta nke mgbanwe nrụgide bụ efu na nke ọzọ.
Ụda dị na ọkà okwu
Ikuku n'ime tube nwere igwe okwu n'otu njedebe wee mechie na njedebe nke ọzọ na -ama jijiji n'ụdị ebili mmiri. Static ogologo oge. Ụdị nke vibration nke ọkpọ nwere njirimara ndị a. Ọ dabara na sine ife, nke ogologo ebili mmiri ya dị ka nke na enwere ebe efu njupụta. Ọnụ iyuzucha na njedebe nke ọkà okwu na njedebe nke tube, n'ihi na ikuku enweghị ike ịgagharị n'enweghị nsogbu n'ihi ọkà okwu na okpu ọkpọ ahụ n'otu n'otu. N'ime oghere ndị a, anyị nwere oke mgbanwe nke nrụgide, antinode ma ọ bụ afọ, nke ebili mmiri kwụ ọtọ.
Ọdịda ụda na mgbasa ozi dị iche iche
Ọdịda ụda na -adịgasị iche dabere na usoro nke ebili mmiri na -agbasa. Ọ na-agbanwekwa na okpomọkụ nke ọkara. Nke a bụ n'ihi na mmụba nke okpomọkụ na-eme ka mmụba nke ugboro ugboro nke mmekọrịta dị n'etiti ihe ndị na-ebu vibrations, na mmụba nke ọrụ a na-abawanye ọsọ ọsọ.
Dịka ọmụmaatụ, na snow, ụda nwere ike ịga ebe dị anya. Nke a bụ n'ihi ntughari n'okpuru snow, nke na -abụghị otu ụdị. Ahịrị snow ọ bụla nwere ọnọdụ okpomọkụ dị iche. Ebe ndị miri emi nke anyanwụ na -apụghị iru na -ajụ oyi karịa elu. N'ígwé oyi ndị a dị nso na ala, ọsọ nke mgbasa ụda na-eji nwayọọ nwayọọ.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ọsọ ụda na -adị ukwuu na ihe siri ike karịa na mmiri mmiri ma na -abawanye na mmiri karịa na gas. Nke a bụ n'ihi na njikọta nke atọm ma ọ bụ njikọ molekul dị elu, ihe ahụ na -esikwu ike. Ọsọ ụda na ikuku (na okpomọkụ nke 20 Celsius C) bụ 343,2 m / s.
Ka anyị hụ ọsọ nke ụda n'ụfọdụ mgbasa ozi:
N'ikuku, na 0 Celsius C, ụda na-aga na ọsọ nke 331 m / s (maka ogo Celsius ọ bụla okpomọkụ na-ebili, ọsọ nke ụda na-abawanye site na 0,6 m / s).
Na mmiri (na 25 Celsius C) ọ bụ 1593 m / s.
N'ime anụ ahụ ọ bụ 1540 m / s.
Na osisi ọ bụ 3700 m / s.
Na kọmpat ọ bụ 4000 m / s.
Na nchara ọ bụ 6100 m / s.
Na aluminom ọ bụ 6400 m / s.
Na cadmium ọ bụ 12400 m / s.
Mgbasa mgbasa nke ebili mmiri dị ezigbo mkpa n'ịmụ ihe resonance na onye nchịkọta nke igwe na -emegharị ma dabere na njirimara gburugburu. Dịka ọmụmaatụ, maka gas, ngwakọta nke ikuku na -enubanye ma ọ bụ gas ndị a na -ere ọkụ na -adabere na njupụta na nrụgide ha.
Ụdị ebili mmiri na -agbasa
Enwere ụdị ebili mmiri abụọ: ebili mmiri ogologo na ebili mmiri transverse.
Ogologo ogologo oge: Ebili mmiri nke ụmụ irighiri ihe na -ama jijiji site n'otu akụkụ gaa na nke ọzọ n'otu ụzọ dị ka ebili mmiri. Onye na -ajụ ihe nwere ike sie ike, mmiri mmiri ma ọ bụ gas. Ya mere, ụda ebili mmiri bụ ebili mmiri ogologo.
Mgbanwe ntụgharị: Ebili mmiri nke ihe ndị dị na ọkara na -ama jijiji elu na ala "n'akụkụ aka nri" na ntụzịaka nke ebili mmiri. Ebili mmiri ndị a na-apụta naanị na ihe siri ike na mmiri mmiri, ọ bụghị gas.
Mana cheta na ebili mmiri na-aga n'akụkụ niile, yabụ na ọ dị mfe iche na ha na-agafe na mpaghara.
Enwere m olile anya na site na ozi a ị ga -amụtakwu gbasara ọsọ ụda na njiri mara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ọsọ nke ụda